Bartlett oo wadahadal kula jira Emirates Airlines si uu u soo bandhigo duulimaad gaar ah oo ku wajahan Jamaica
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Bartlett oo wadahadal kula jira Emirates Airlines si uu u soo bandhigo duulimaad gaar ah oo ku wajahan Jamaica
Airlines • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Jamaica News Breaking • News • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Imaaraadka Carabta
Wasiirka Dalxiiska Jamaica, Hon. Edmund Bartlett (midig) waxa uu salaamayaa VP Sare ee Hawlaha Ganacsiga ee Emirates Airlines - Ameerika, Salem Obaidalla, ka dib kulan wax ku ool ah oo ka dhacay Xarunta Shirkadda Dubai. Intii uu socday kulanka, oo dhacay 24-kii Oktoobar, waxay ka wada hadleen suurtagalnimada in la soo bandhigo adeeg gaar ah oo u dhexeeya Dubai iyo Jamaica, oo loogu dabaaldegayo Maalinta Jamaica ee Dubai Expo 2020, oo la xusay Febraayo 2022.
Wasiirka Dalxiiska Jamaica, Hon. Edmund Bartlett, ayaa shaaca ka qaaday in uu bilaabay wadahadalo uu la yeelanayo wakiilada sare ee Emirates Airlines, ujeedaduna tahay in horaanta sanadka soo socda la bilaabo duulimaad gaar ah oo u dhaxeeya Dubai iyo Jamaica. Warkan ka soo baxay Wasiirka ayaa ku soo beegmaya xilli shalay uu Wasiirku soo gebagebeeyey hawlihii Suuqgeynta ee dalka Isu-tagga Imaaraadka Carabta, isagoo kulan xasaasi ah kula yeeshay Xaruntooda Dubai Madaxda Sare ee Shirkadda Diyaaradaha ee Emirates Airlines.
Waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee dooddu waxay ahayd suurtogalnimada in la soo bandhigo adeeg gaar ah oo u dhexeeya Dubai iyo Jamaica, iyadoo loo dabaaldegayo Maalinta Jamaica ee Expo 2020, Dubai Febraayo 2022.
Waxa kale oo jirtay dood wax ku ool ah oo ku saabsan dalxiiska iyo rajada soo kabashada diyaaradaha.
Wadahadalo dheeri ah ayaa la filayaa si ay awood ugu yeeshaan ka-qaybgalka Imaaraatka iyo la-hawlgalayaasha kale ee Bariga Dhexe.
Nuxurka ugu weyn ee doodda ballaaran ayaa ahayd suurtagalnimada in la soo bandhigo adeeg gaar ah oo u dhexeeya Dubai iyo Jamaica, iyadoo loo dabaaldegayo Maalinta Jamaica ee Expo 2020, Dubai ee Febraayo 2022. "Waxaan ku heshiinnay inaan sahamno suurtagalnimada diyaarinta duulimaadkan, faahfaahinta kuwaas oo ah in laga shaqeeyo sida ugu dhakhsaha badan. Waxa kale oo jirtay dood wax ku ool ah oo ku saabsan dalxiiska iyo rajada dib u soo kabashada diyaaradaha iyo qaabka V-qaabka togan ee Jamaica iyo Dubai ay la kulmeen,” ayuu yidhi Bartlett.
Waxa uu rajaynayaa wada-hadallo dheeraad ah oo ku saabsan istaraatiijiyooyinka meelo badan oo lagu dejiyay waqooyiga Kariibiyaanka si ay awood ugu yeeshaan ka-qaybgalka wanaagsan ee Imaaraadka iyo la-hawlgalayaasha kale ee Bariga Dhexe. Emirates waa diyaaradda ugu weyn ee Imaaraadka, iyo Bariga Dhexe guud ahaan, shaqeeya in ka badan 3,600 duulimaad todobaadkii.
Intii ay ku sugnaayeen Imaaraadka, Wasiir Bartlett iyo kooxdiisu waxay sidoo kale la kulmeen Hay'adda Dalxiiska ee dalka si ay uga wadahadlaan iskaashiga maalgashiga dalxiiska ee gobolka; Hindisaha dalxiiska Bariga Dhexe; iyo marinka laga galo Waqooyiga Afrika iyo Aasiya iyo fududaynta duullimaadyada. Waxa kale oo jiray kulamo lala yeeshay madaxda EMAAR, oo lagu doodi karo martigelinta ugu weyn uguna sharafta badan iyo horumarinta guryaha/Bulshada ee Bariga Dhexe; DP World, waa mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn adduunka ee dhinaca saadka iyo saadka badda; DNATA, oo ah hawl wadeenka dalxiiska ee ugu wayn UAE iyo TRACT, oo ah hawlwadeen dalxiis oo awood badan gudaha Hindiya.
" Wareegii hawlaha suuq-geyneed ee kooxdayda iyo aniguba waxaan la yeelanaynay wada-hawlgalayaasha dalxiiska iyo saadka ee muhiimka ah ee UAE, waxay ahaayeen kuwo miro dhal ah. Tani waxay shaki la'aan keeni doontaa habka lagu xaqiijinayo maalgashiga cusub, suuqyada iyo albaabada laga soo galo Bariga Dhexe, Aasiya / Aasiyada Yar iyo Afrika ilaa Jamaica iyo inta kale ee Kariibiyaanka," ayuu yiri Bartlett.
Wasiirka Bartlett oo ka imaanaya Imaaraadka ayaa u ambabixi doona magaalada Riyadh ee dalka Sacuudiga, halkaasoo uu kaga hadli doono daabacaadda 5-aad ee Hindisaha Maalgashiga Mustaqbalka (FII). FII-da sanadkan waxa ka mid noqon doona wada sheekaysi qoto dheer oo ku saabsan fursadaha cusub ee maalgashiga caalamiga ah, falanqaynta isbeddellada warshadaha, iyo isku xidhka madaxda sare, hoggaamiyeyaasha adduunka, iyo khubarada.
Waxaa ku biiri doona Senator, Hon. Aubyn Hill oo awood u leh inuu yahay Wasiirka oo aan lahayn Portfolio ee Wasaaradda Kobaca Dhaqaalaha iyo Abuurista Shaqada (MEGJC), oo leh mas'uuliyadda Biyaha, Dhulka, Dib-u-soo-celinta Ganacsiga (BPOs), Maamulka Aagga Dhaqaalaha Gaarka ah ee Jamaica iyo mashaariicda gaarka ah.